APHIDS ON QAJAARKA EE AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO IYO ON SIRQAHA: SIDA LOO MAAREEYO CAYAYAAN AH, TAAS OO U MUUQDAY ON CALEEMAHA KIIMIKADA, BIOLOGICAL IYO DAAWEYNTA DAD, SI KA FIICAN IN LA XAKAMEEYO? - SOOSAARKA DALAGGA
Cadaadiska Cabbitaanka: Sida loola tacaalo cayayaan qajaarka ah?
Weerarada afafka ee qajaarka ee qeybta labaad ee xagaaga. Cayayaanka xayiray qaybta hoose ee caleemaha, ubaxa, ugxan-yarta. Dhirta cudurka qaba waxaa si fudud loo aqoonsan karaa caleemo cagaaran iyo ubaxyo dhacay.
Bilaha xagaaga ee xagaaga ayaa abuuraya xaalado heer sare ah muuqaalka aphids ee lagu koriyo oo lagu dabaqo beeraha. Qoyska ka mid ah cayayaanka ayaa si dhaqso ah u kordhaya waxayna sababi karaan waxyeelo dalagga waqti gaaban. Khatarta ka iman karta duulaanku waa sidoo kale in cayayaankaasi ay u dulqaadan karaan cudurrada fayraska ah ee ku dhawaad ​​aan la daweyn karin. Maxaa la sameeyaa haddii aphid ka muuqato qajaarka? Hababka ugu fiican iyo siyaabaha looga hortago cayayaankan ayaa lagu sharaxay qodobkan.
Qajaarka waa raaxo jecel nuucyada kala duwan ee noocyada soo socda:
Gaar ahaan waxay jecel yihiin aphid. Cayayaanka ayaa leh midabka cagaaran: way adagtahay in si dhakhso ah loo arko caleemaha qajaar iyo afkoda.
Noocyada kale ee kaarboonka qabta qajaarka waxay ku midoobaan hal magac - aphid madow. Midabka cayayaankaasi waxay ku kala duwan yihiin cagaar madow ilaa bunaal.
Aphid wuxuu doorbidaa asiidhyada amino iyo carbohydrates ku jira dhammaan qaybaha baadiyaha iyo casiirka.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan noocyada kala duwan ee aphids ayaa laga heli karaa arrintan.
Waqtiga weerarka caadiga ahi waa qeybta labaad ee xagaaga, tan iyo markii cayayaanku uu bilaabo jimicsi firfircoon. Waxay ku taallaa gumeysiga hoose ee caleemaha qajaar, aphid khafiif ah wuxuu ku quudiyaa casiir (si faahfaahsan oo ku saabsan waxa aphids ku quudin dabeecadda, waxaad ka heli kartaa halkan).
Duurka waxay bilaabaan in ay lumiyaan xoog, caleemaha huruud noqdaan iyo curl, koritaanka qajaarka hoos u hoos. Dhibaato yar oo qajaarka ah ma laha aphid madow. Qoyska Voracious wuxuu saameeyaa dhamaan qaybaha geedka:
Cuntada oo idil.
Warshad dhalinyaro ah, oo ay soo weerartay colony of aphids, ma awoodaan inay horumariyaan oo siiyo ugxan. Inta badan qajaarka dhinta.
Qajaaradu waxay ku dhacdaa weerarka xayawaanka ee ma aha oo kaliya goobta bannaan, laakiin sidoo kale in lagu koriyo. Cayayaanka qafiifka ah, cabitaanka sonkorta leh (suuf), daboolka caleemaha qajaar iyo waa caano fiican oo cayayaanka beerta kale.
Xaggee buu ka yimid iyo sababta?
Dadka waaweyn ee aphids u dulqaadan karin dhaxan, laakiin dirxiga ay ka badbaadi karaan jiilaalka. Xaaladaha qaboobaha, cayayaanku sida caadiga ah waxay doortaan caws. Goobta ugu raaxaysashada ee buulshada waa caleemaha asalka ah. Si wadajir ah ciidda faddaraysan, aphids waxay geli kartaa aqalka dhirta lagu koriyo.
Qodhooyin ku dhex nool walxaha xasaasiyadda leh ee aphids waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​badbaadada aphids. Cayayaanka waxay wadaagaan labadaba analills iyo hudheelada qoob ka ciyaarka, kuwaas oo ay ku diyaari karaan koriyo iyo aqallo lagu koriyo (macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iskudhafka qurxinta iyo aphids, waxaad ka heli kartaa buuggan).
Si aphid loo bilaabo ka soo kacitaanka hurdada jiilaalka, waa ku filan inaad sare u qaaddo heerkulka hawada illaa +5 digrii Cayayaanka si firfircoon u jilciya, quudinta cawska. Waqtiga ay geedo qajaar la beeray, aphid waxay u dhaqaaqeysaa marxal cusub oo horumar ah - waxay leedahay baalal. Markaad heleysid tayada duulimaadka, deegaanada aphids waxay raadiyaan cunto cusub. Beerka qajaar dhalinyaro ah - jimicsi dhadhan fiican leh ee cayayaanka ee cayayaanka.
Qodhooyinku waxay gacan ka geystaan ​​faafitaanka sii kordhaya ee barafka caleenta ah ee looxyo dhirta khudradda.. Waxay soo jiidanayaan casiir sokorta leh.
Sida loo xaliyo aphids, haddii ay u muuqatay on hoose ee caleemaha on qajaarka koraan ee lagu koriyo ah? In dagaalka ka dhanka ah cayayaanka, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo waqtiga saameeya, sababtoo ah cayayaanka voracious waxay burburin karaan inta badan dhirta qajaar ee kaliya 7-8 maalmood. Iyadoo cayayaanku la dagaallami karo daawooyinka dadweynaha iyo kiimikooyinka la awoodi karo ee wax soosaarka warshadaha.
Siyaabo kala duwan oo loo daaweeyo dhirta laga soo kabsado
Hadafka guud ee isticmaalka cuntooyinka caan ah waa in urta foosha ee qaybaha ay ka hortagto cayayaan beerashada. Saabuun, basbaaska, malayga iyo alaabta kale waxay sameeyaan caleemo aan ku habbooneyn cuntada, dhirbaaxada dhirta ayaa dhimata ama baxda dhirta. Sidoo kale, isku mid kale oo macquul ah - macquul ah oo kaliya tiro yar oo cayayaanka.
Qeybaha Karinta Codsiga, wax soo saarka
Biyaha iyo saabuunta Si aad u diyaariso xalka waxaad u baahan tahay 1 litir oo biyo ah iyo 2 tbsp. saabuunta dareeraha.
Isticmaal suunka qoyan ama maro jilicsan.
Daaweynta waa in la sameeyaa horraantii subaxa ama ka dib marka qorraxdu hoos u dhacdo.
Ka dib 24 saacadood ka dib, iska maydhin inta kale ee xalka.
Faleeti Qaado 2-3 gawaarida jar jartey oo aad jarjartey (waad karikar kartaa), iyaga ku sawir baaldi biyo ah. Haddii lakabka dhirta uu hore u buuxiyey beerta, ka dibna 40 g saabuun, 2-3 dhibcood oo iodine ah iyo 150 g oo ash ashado ah ayaa lagu dari karaa xalka. Hawlgalka waa la sameeyaa ka dib qorrax dhaca, ku buufinta xalka ku saabsan afkoda iyo caleemaha sare. Waa muhiim in la hubiyo in dheecaanku aanu helin nidaamka asaasiga ah.
Garlic 500 g oo la jarjarey ku dar 3 litir oo biyo ah. Si aad ugu adkeyso bangiga, dabool daboolka 5 maalmood. Isku-dhufashada walxaha, ku daawee aphids cudurka iyo dhirta caafimaad leh.
Mustard Ka hor inta ku adkeyso 10 g budada iniin khardal ah, lagu kala diri jiray 1 litir oo biyo ah. Ka dibna ku dar 800 ml oo biyo ah xalalka soo baxay. Isticmaal dhalada buufin, ku buufi dhammaan bushkulaha qajaarka.
Celandine Warshadu waxay leedahay juus ah sunta, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad la shaqeysid gacmo gashi, iyo isticmaalka ka dib, isticmaal weelka iyo mindi kadib markaad isticmaasho biyo saabuun leh iyo biyo nadiif ah. Waayo xalku wuxuu u baahan yahay 100-150 g cawska cusub ama 300 g qalalan. Celcelin la jarjarey ku shub 10 litir oo biyo ah, dabool dabool, ka tag si aad u istaagto qorraxda 2 maalmood. Cadaadiska iyo duurka buufin leh qoryaha buufinta.
Yarrow Si aad u bilowdo diyaarinta faleebo diyaarsan. Si taas loo sameeyo, qoyaan 900 g cawska cusub iyo 2 litir oo biyo ah karkaraya weel. Dabool oo ku duub tuwaal qarsoodi ah saacad. Hoos-u-dhalinta soo baxday waxaa lagu qasi jiray 10 litir oo biyo ah. Isticmaal 1 litir oo faleebo ah halkii mitir oo labajibbaaran oo geedo qajaar ah.
Tubaakada Si aad u diyaariso xal 400 g oo tubaako ama tubaako ku shub biyo kulul. Ku adkeyso 2 maalmood. Ka hor inta aan la shaqeynin, 80-100 g aqalka ama saabuunta taranka ayaa lagu daraa xalka.
Baradhada ama yaanyo dushooda Si aad u diyaariso xalka adoo isticmaalaya caleemaha dhinaca iyo saqafyada daciifka ah. 1 baaldi biyo qabow waxaa laga rabaa 2 ilaa 3 kg oo ah cagaarka. U baahan tahay inaad ku adkaysato daboolka 24 saacadood. Daadi caleemaha.
Horseria Wixii diyaarinta u baahan doontaa 7-8 xididdada geedka. Si yaryar u, ku shub 3 litir oo biyo diirran. Ka dib 3 saacadood ka dib, faleebo soo baxday ayaa la miiray, iyo keega saliid ee haray ku shub biyo iyo ku adkeyso 3 saacadood oo kale. Infusions soo dhalaalay ayaa isku dhafan hal hal ah. Faleebo ee caleemaha qajaarka malayga waxaa lagu buufin karaa oo si tartiib ah u tirtiri. Ka hor inta aan daaweynin, ku mil biyo (1 koob oo xal ah 5 litir).
Ash geed In baaldi biyo, walaaq ilaa dhamaystiran 3 tbsp. qaadooyin ah budada qoryaha qoryaha iyo saabuun 100 g oo la jarjaray. Daadi beerto.
Beeraley kasta oo kasta waa inuu ogaado sida loo dhigo aphids on qajaarka, sida loo maareeyo cayayaan this marka beerto ee dhulka u furan iyo in aqalka dhirta lagu koriyo, daroogooyinka ay u isticmaalaan.
Nettle, Gooryaanka, lafa-goyska iyo dhirta ayaa sidoo kale ku habboon daaweynta dhirta.
Wixii waxtar leh, shan dhibcood oo cagaaran ama iodine ah ayaa lagu dari karaa infusions geedaha, iyo sidoo kale 2-3 kristaan ​​oo manganese ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo habka loo yaqaan aphids 1-2 jeer maalintii..
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dawooyinka dadweynaha ee aphids ayaa laga heli karaa halkan.
Khatarta iyo nafleyda
Maxaa iyo goorta la samaynayo qajaarka? Waxaa macquul ah in lagu daro kiimikada oo kaliya mudadaas marka aysan jirin ugxan-haween qajaar ah. Wax soo saarka warshadaha waa sun ku ah shinni, sidaas darteed waa in aan loo isticmaalin inta lagu jiro pollination.
Kiimikooyinka ugu waxtarka badan waxaa ka mid ah:
Taliyaha - Fiirinta biyaha ee laysku daro.
Corado - Wax ku ool ah oo ka dhan ah aphids iyo kuwa lamid ah colorado. Saameynta difaaca kadib daaweyntu waxay qaadataa 3-4 toddobaad oo kale.
Aktara - horaantii maalinta labaad ka dib markii lagu buufinayay cayayaanka ayaa ku dhinta. Cayayaanka cusub, dheecaanka dhirta wuxuu noqonayaa sun.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa Peretrium, Inta-Vir, Spark Bio, Fitoverm. Hababka bayoolojiga waxay ka koobanyihiin soo jiidashada cayayaanka kale - cadowga aphids. Doorashadani waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah ujeedooyin ka hortag ah. Tusaale ahaan, haddii xayawaanka peat ee yaryar ay ku faafaan meeldhexaad, waxay soo jiidan doontaa midhadhkii jilicsan ee jimicsiga. Waxaad ku soo jiidan kartaa ladarbirdh - cadowga dabiiciga ah ee aphids Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan bukaannada yaryar, halka caawiyayaasha kale ee dagaalka ka dhanka ah aphids waxaa laga heli karaa arrintan.
Beeraleyga oo koraya oo keliya qajaarka keliya ayaa laga yaabaa inuu u baahan yahay macluumaad ku saabsan la dagaallanka aphids ee dhirta kala duwan:
Sidee looga takhalusi karaa aphids on basbaas?
Sidee baa loola tacaalaa aphids ee geedo khudrad ah?
Maxaa la sameeyaa haddii aphids ka bilawdo-aadanku jecel yahay?
Talooyin waxay u arkaan inay bannaanka u diraan si ay ula dagaallamaan aphids cagaaran cagaaran iyo noocyada kale.
Sidee si wax ku ool ah ula tacaalaan aphids on currants?
Sidee si joogto ah uga takhalusi kartaa cayayaanka beerta?
Qaar ka mid ah talaabooyinka fudud ayaa kaa caawin doona in la ilaaliyo warshad qajaar ah oo ka yimaada weerarada aphid. Sifooyinka ka dhanka ah aphids:
Daryeelka haboon iyo tiknoolajiga sii kordhaya. Waxaa muhiim ah in lala socdo dheelitirka biyaha iyo iftiinka, si hawo lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo, si dhexdhexaad ah u quudiyo.
Dhinaca wareegga sariiraha ama aqallada lagu koriyo, waxaad dhali kartaa dhirta kaas oo cabsiin doona aphids nacabkooda. Taasi, basasha, ubaxyo chamomile, calendula ama marigold.
Si looga hortago muuqaalka aphids ee lagu koriyo, ciidda waa in la beddelo dayrta.
Dhulka bedelida wuxuu ku habboon yahay qaybaha beerta halkaas oo qajaarka iyo qajaar iyo ubaxyo aan hore loo korin.
Ka hor inta beerto, hubi aqalka dhirta lagu koriyo (aqalka dhirta lagu koriyo) joogitaanka hareeraha dabiiciga ah iyo, haddii ay lagama maarmaan noqoto, in la baabi'iyo.
Lime dhammaan walxaha alwaaxda gudaha dhismaha. Goobo dhalaalaya si fiican u dhaq iyada oo xal of copper sulfate.
Sidaa darteed, duullaankii aphid waa dhibaato khatar ah laakiin la xaliyo. Iyada oo cayayaanku awoodaan iyo waa in la dagaalamaa. Waxtarnimada dagaalka ka dhanka ah aphids waxay ku xiran tahay hab isku dhafan.. Tallaabooyin ka hortag ah iyo daaweyn wax ku ool ah waxay keenaysaa natiijada la rabay.